जापानी जोडीको कथा : जसले दृष्टिविहीन पत्नीलाई उपहार दिए, मायाको फूलबारी ! – Nepal Japan
नेपाली समय : 10:44:35
जापानी समय : 01:59:35
जापानी जोडीको कथा : जसले दृष्टिविहीन पत्नीलाई उपहार दिए, मायाको फूलबारी !
21 June, 2019 12:30 | जापान | comments | 56100 Views
घरवरपर फूल रोप्ने चाहना त धेरैलाई होला, तर जापानका एक बृद्धको रुची त लोभलाग्दो नै छ । जीवनसाथीको लागि एक ‘पागलप्रेमी’ले कतिसम्म मेहनत गर्नसक्छ भन्ने उदाहरण पनि उनको कर्मबाट थाहा हुन्छ ।
खासमा यो वास्तविकता हो, एक जापानी जोडीको । तोसीयुकी कुरोकी नामका एक जापानी किसान गाइ फार्ममा काम गर्थे । विवाह गरेको ३० वर्ष पुगेपछि तोसीयुकीकी पत्नी योसुका कुरोकी सुगरका कारण आँखा नदेख्ने भइन् ।
निराशाले योसुका यतिसम्म सोच्न थालिन् कि, जीवनबाटै बिस्राम लिने निर्णयमा पुगेकी थिइन् । तर श्रीमान पत्नीलाई सम्झाउने प्रयास गर्दैथिए । एक दिन तोसीयुकीले आफ्नो गाइ फार्मछेउमा एउटा चम्किलो रंगीन फूल देखे, सिबाजाकुरा । फक्रँदै गरेको त्यो सुन्दर फूल आफ्नी जीवनसाथी योसुकाले भने देख्न पाइनन् भन्ने चिन्ता भयो उनलाई ।
तर उनलाई लाग्यो कि, यो फूलको सुगन्ध त पक्कै सुंघ्न सक्थिन् । तर एउटै फूलको सुगन्ध त्यति फैलन सम्भव थिएन । यसपछि तोसीयुकीले आफ्नो घर र फार्म छेउछाउ त्यस्ता फूल रोप्न थाले । उनले फूल यति धेरै रोप्न थाले कि, अन्ततः उनको घर र फार्म सिंगै फूलको बगैँचा बन्यो ।
छिमेकीहरु र बाहिरबाट पनि उनको बगैँचा हेर्न आउन थाले । हरेक सिजन अनुसारका फूल त्यहाँ हुन्थे । ती फूल हेर्न पर्यटकको भीड नै लाग्न थाल्यो । यतिन्जेलसम्म यासुको ती फूलको सुगन्धमा रमाउन थालिसकेकी थिइन् । देख्न नसके पनि उनी बगैँचाका फूलले उनलाई भुल्ने र रमाउने तरिका सिकाएका थिए ।
खासमा तोसीयुकीले यसरी फूल रोप्न सुरु गरेको २५ वर्षअघि नै हो । बिस्तारै बगैँचामा रुपान्तर भएको उनको घर र फार्म अहिले म्युजियम बनेको छ । जहाँ तोसीयुकीले आफ्नी श्रीमतीलाई खुसी दिन हजारौँ फूल रोपेका थिए । अहिले पर्यटकहरु फूल संग्रहालय घुम्न भन्दै उनको घर पुग्छन् ।
जापानमा हरेक मार्च र अप्रिल सिबाजाकुरा फूल फूल्ने मौसम हो । जहाँ हरेक वर्ष ७ हजार पर्यटक सिबाजाकुराको सौन्दर्य हेर्न तोसीयुकीको घरमा पुग्छन् । यो जोडी अहिले ७० र ८० पुगे । बृद्धावस्थामा मन भुलाउने यही ‘मायाको फूलबारी’ छ ।
एजेन्सी/ अन्नपूर्ण पोस्ट